पाउलान् त किसानले तरकारीको सही मोल ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
पाउलान् त किसानले तरकारीको सही मोल ?
सरिता थारू || 1 April, 2021
आफूले उत्पादन गरेका तरकारीको उचित मूल्य अब किसानले पाउने भएका छन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले होल्डिङ यार्ड/अक्सन यार्ड योजना ल्याएपछि किसानले आफ्नो उत्पादन आफै बेच्न पाउने भएका हुन् । तरकारी व्यापारमा विचौलिया हावी भएको गुनासो बढेको थियो । किसानले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य नपाएको गुनासो आएपछि तिनले उत्पादन गरेका तरकारी सिधै व्यवसायीसंग बिक्री गर्न समितिले विशेष योजना नै ल्याएर तरकारीको उचित मोल दिलाउने निर्णय गरेको समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताए ।
सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार यही चैत्र १८ गतेबाट यो योजना परीक्षण गरिएको छ । कालीमाटी थोक बजार भित्रको फिससेट भवनमा रहेको १२ वटा स्टलमा यो योजना परीक्षण सुरु गरिएको हो ।
के हो होल्डिङ यार्ड/अक्सन यार्ड ?
किसानले उत्पादन गरेका तरकारी आफैले बेच्ने योजना हो होल्डिङ यार्ड/अक्सन यार्ड । यसमा किसानले आफूले उत्पादन गरेका तरकारी बजारमा ल्याएर बजार मूल्य तोेकेर बेच्न सक्ने छन् । यो एक प्रकारको लिलामी बजार हो । यस बजारमा किसानले उत्पादन गरेका तरकारी तरकारी व्यवसायीहरूले मूल्य तोक्ने र किन्ने गर्छन् । यसमा विचौलियाले चलखेल गर्न पाउँदैनन् । यस योजनाबाट किसानले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने श्रेष्ठको दाबी छ ।
किसानले यो योजनाको कसरी सदुपयोग गर्ने ?
किसानले उत्पादन गरेको तरकारी कम्तिमा २ टन बजारमा ल्याउनुपर्ने छ । २ टन तरकारी स्टलमा राखेवापत ४ सय र सो भन्दा बढी तरकारी ल्याएमा २० पैसा प्रति किलोका दरले समितिलाई शुल्क बुझाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । यसरी ल्याएको तरकारी किसानले थोकमै बेच्नुपर्ने, खुद्रा मूल्यमा बेच्न नपाइने उनले बताए ।
किसानले प्रत्येक दिन साँझ ७ बजेदेखि विहान ४ बजेसम्म स्टलमा तरकारी राखेर बेच्न सक्ने उनले बताए । यसरी ल्याएको तरकारीको विषादी परीक्षण हुने उनले जनाए । यो योजना परीक्षणमै रहेकाले केही दिनका लागि किसानले निःशुल्क स्टल पाउनेछन् ।